Faribolana Sandratra : hiantsa ny « Amboara nongononina » | NewsMada
Faribolana Sandratra : hiantsa ny « Amboara nongononina »
Ao anatin’ny « Amboara nongononina » indray no hifamotoana ny mpankafy antsa tononkalo, anio tolakandro, etsy amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM) etsy amin’ny tohatohabaton’Antaninarenina, miaraka amin’ireo mpanakanton’ny Faribolana Sandratra. Hetsika fanaon’ny fikambanana isaky ny tolakandron’ny asabotsy fahefatry ny volana izany.
Niara-niketrika azy ity am-bolana maro ry Hery Ny Aina, Irà, Tsitohery ary Radada. Anisan’ireo mpiray faribolana tsy namoaka vokatra hojifaina matetika izy efatra mirahalahy ireo. Tsy nidika akory izany hoe nangina ny fipololotran’ny aingam-panahy. Manampy izany ireo vokatra efa vita tany aloha tany, izay nofongorina indray, navondrona ho amboara ho azo jifaina ary izao hatolotra ny mpitia haisoratra izao.
Ho antsain’ny mpiray faribolana ireo voarakitra ao ary azon’ny rehetra vidiana koa ny amboara, ho rango-tsiaro. Marihina, mifanojo indrindra amin’ny fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny boky ity hetsika, anio tolakandro, ity. Araka izany, singa iray ho famahoana ny boky sy ny vakiteny sady fanomezana aina ny haisoratra ny fihaonana.
Tsiahivina fa hatolotr’i Avelo Nidor, ny asabotsy 30 avrily ho avy izao, ao amin’ny Tranompokonolona Analakely, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, ny « Vaovao Mahafaly ». Ho antsaina sy holalaovina toy ny efa nanaovana ireo amboara hafa koa ity vokatra vaovao ity.